Ukugxininisa okuqhubekayo ebomini bethu ... Baya kuhlutha njani, banokuchaphazela impilo yethu? Ngaba imbono ingakwazi ukuhlambalaza ngesiseko seentlanzi? Sifunda ngoku ngoku!
Iliso lilungu lombono apho sibona ihlabathi elisijikelezayo. Ngaphambili kweli li-iris, elilawula umlinganiselo wokukhanya okungena kwiso. Kwi-iris iimisipha, ngokukhanya okukhanyayo zivumelwano, ukunciphisa ukukhutshwa komfundi kwaye ngoko ukunciphisa ukukhanya okukhanyayo kufaka iso. Ngokuhlwa, izihlunu ziphumle, ukuvulwa komfundi kukhula ngokufanelekileyo kwaye kukuvumela ukukhanya ngakumbi. Uqokelela ukukhanya okungena ngaphakathi kweso kwaye ulwalathisela kwi-retina - i-lens. Kukuncediswa lensensi yokuba umlambo okhanyayo ugxile kwi-retina, ukudala umfanekiso kuwo. Ukujonga izinto ezisendaweni eyahlukileyo ukusuka kwiso, iiswini zamehlo ziguqula i-lens, zitshintsha i-curvature yayo, ukuze umfanekiso ocacileyo uvele kwi-retina yelihlo.
Xa ukhangela isihloko ngokujikeleza emaphethelweni okuphazamiseka, kuthetha imbonakalo embi
Ukuba umntu akabonanga kakuhle izinto ezikude, ke le isifo sesiso - myopia. Kwaye ukuba ngaba kunjalo, ubona kakuhle izinto ezikufutshane-ukujonga. Kukhona esinye isifo seso-astigmatism. Nge-astigmatism, irises kweso lesobunxele nelinene liphihliwe ngeendlela ezahlukeneyo, ngoko ke imibala ephuma kwindawo enye ayikwazi ukugxila. Into ebalulekileyo kwimbono eqhelekileyo yento ayikho imeko ye-lens, kodwa umzamo we-muscular usetyenziswe ukuhlolisisa into. Ngako oko, akufanele utyumle amehlo akho ukujonga le nto okanye into. Abantu abanombono oqhelekileyo abazizame ukugxila amehlo abo kwinqanaba elithile, ukuba umxholo awubonakali ngokucacileyo, ngoko umbono uguqula ngokuzenzekelayo into ebonakala ngokucacileyo. Nayiphi na imeko yengqondo ingabangela uxinzelelo kwimisipha yamehlo. Ngoxinzelelo lweemisipha zamehlo, ukuma kwenguqu kwamehlo, kwaye iso lisekho igazi. Singaxelela ukuba impilo yamehlo ixhomekeke ekunikezeni igazi okwaneleyo, kwaye ukunikezelwa kwegazi kuxhomekeke kwimeko yengqondo. Xa umntu ehlala ezolile, ekhululekile, ingqondo yakhe inikwe igazi elaneleyo, i-nertic optic kunye namaziko okubukela ngokuqhelekileyo zixhaphaza igazi. Yaye ukuba imeko yengqondo ibuhlungu, iimeko ezixhalabileyo, zinovuyo, ukujikeleza kwegazi kuphazamiseka. Iimbono ze-optic kunye namaziko okubonakalayo anqumle ukufumana igazi kwimvumi efunekayo. Oko kukuthi, umntu ngokwakhe unako ukwandisa ukujikeleza kwegazi, kuba kunokubangela iingcamango ezixinzelelekileyo.
Isiphetho - nayiphina imeko ephazamisayo eyenziwa ngumntu, iholele ekuboneni kakubi. Ijoni eliphilileyo kwindawo ekhululekile, xa uhlola izinto ezikude, njengoko udibeneyo, kwaye xa ukhangela izinto ezikufuphi - zide kunye ne-axis. Ukuxinezeleka kukuvimbela iso ukuba litshintshe umumo walo. Ukunceda izihlunu zamehlo, abantu baxhobile ngeiglasi. Ngenxa yoko, izihlunu ze-ocular ziyancipha ngakumbi. Ukugcina ubuchule bomntu, kubalulekile ukuba umzimba ube kwindawo esebenzayo.
Ukugcina umbono oqhelekileyo, kufuneka wenze i-gymnastics kwamehlo. Ukuzivocavoca kufuneka kwenziwe ngokucwangcisiweyo. Ngokuqhelekileyo ukhulule amehlo akho. Ukwenza oku, gubungela iipilisi ngamaminithi ambalwa, phumula, khumbula into enhle, i-seascape enhle okanye indawo ye-landscape. Ukutya okufanelekileyo kubaluleke kakhulu kumbono oqhelekileyo. Ukutya kufuneka kube nobutyebi kwiivithamini, ngokukodwa iivithamini A kunye no-D. I-Vitamin A ifumaneka kwi-bhotela, kwi-fover kunye neoli yeentlanzi, kwiidroti, isipinashi, i-persimmons, njl. Ukungabikho kwevithamini A kukhokelela kwimbono embi ngokuhlwa (ubumfama bobusuku). I-Vitamin D ifumaneka kwi-yolk yeqanda, kwi-herring, ibhotela. Kubalulekile ukuhamba ngokuphindaphindiweyo, ikakhulukazi emini ukususela kwi-10 ukuya kwiiyure eziyi-16, ekubeni ngeli xesha ukuba ubukhulu beemitha zokukhanya eziyimfuneko kuboniswe kakuhle. Ukuphucula amehlo, kunconywa ukusela ijusikiti, kunye nokutya amajikijolo e-ash ash. Awukwazi ukujonga enye into okanye kwizinto ezincinci ixesha elide. Yaye ukuba kukho isidingo salokhu, kufuneka uhlale uphumule amehlo akho. Isiluleko somntu sokuphazamiseka kombono kumhlaba oyimimangaliso yindlela elandelayo: ubilise inkukhu yenkukhu, unqunywe kunye kunye ne-hemisphere yeprotheni kufuneka ifakwe kwisilumko esifanelekileyo. Kwiprotheni yathintela kuphela isikhumba ecaleni kwamehlo, kwaye iliso ngokwayo ayifuni.
Zama ukungabi phantsi kweemeko ezixinzelelekileyo, uthathe into eyinyani njengoko kunjalo. Jabulela ubomi kunye nayo yonke imbonakalo yayo. Qiniseka ukuba ukhulula uxinzelelo lwengqondo, kunye nokuxhatshazwa okwakusasazeka emini, ukusebenzisa izivivinyo ukuphucula izihlunu zamehlo. Ukuba yonke imigaqo ilandelwa, umbono awukwazi kuphela ukugcinwa, kodwa kuphuculwe. Ngoku uyazi malunga nokuba umbono ungadlukisayo kwiimbilini. Yiba nesimo esoteric kwaye ukhusele ubomi bakho kwiintlungu ezingenakufunwa.
Ziziphi izifo ezinokubangelwa utywala?
Iimpawu ezisetyenziswayo zeoli ye-hazelnut kunye nesicelo sayo
Intloko kwi-logeal lobe
Umva ubuhlungu ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokugcina ubunzima behla?
I-pie kunye nokuzaliswa kwempompo kunye ne-crushed whipped
Ukulungela udliwano-ndlebe - ungubani na ngakumbi kunabanye
Imfihlelo yobuhle kunye nempilo yobuso, umzimba, isikhumba seenwele
Isiqhamo esiluncedo kakhulu
6 ezikhethiweyo zokupheka kweevgan
Inkqubo emfutshane yokwenza umthambo
Izindlela zemvelo zonyango lwe-legnd syndrome (inxalenye 1)
Isobho so bulumko
Iidraphi zokufumana ubuso obuqabulayo